4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole အမြောက်အမြား, (25676-75-9), ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 25676-75-9 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) video
နာမ် · 4-bromo-1-methylimidazole
· 1H-Imidazole, 4-bromo-1-methyl-
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 159.964
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 161.002
သိပ်သည်းဆ (ဆ / mL) 1.614 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 25
မျက်စိအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း n20 / D ကို 1.545
IUPAC name ကို 4-bromo-1-methylimidazole
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 25676-75-9
ကြွက်ကြွက်ဆူပွိုင့် (C) 91-93 / 0.1mm
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9)
APICMO မှာကျနော်တို့ကတခြားဓာတုပစ္စည်းအကြား, (4-1-1), synthesize နှင့် 25676-bromo-75-methyl-9H-imidazole အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်လျော။
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) ဖျေါပွခကျြ
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole heterocytes, heterocyclic အဆောက်အဦလုပ်ကွက်, imidazoles, C3 မှ C8, halogenated နှင့်အခြားဆက်စပ်အဆောက်အဦလုပ်ကွက်ကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစား၌တည်ရှိ၏.
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) အရည် form မှာပါရှိပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင် -0 ယူနစ်
လက်ခံသူ - 1 ယူနစ်
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပူ, ဓာတ်အေးဂျင့်များ, အက်ဆစ်, ဒါမှမဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါကိုယ်ကသာ decomposes ။
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) တွက်ချက် Properties ကို
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 17.8 တစ် ^ 2
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 159.964
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole Synthesis လမ်းကြောင်း
အရေပြားနဲ့တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ထိုကဲ့သို့သောနာကျင်ခြင်းအဖြစ်တုံ့ပြန်မှု, ချေး, ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်လာခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအမံ 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါ။
ဒီထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာသင်အမြဲဒီဓာတုနှင့်အတူမည်သည့်အဆက်အသွယ်မှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အပြည့်အဝအကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်အာမခံပါသည်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်သင့်သည်, သင်အငွေ့သို့မဟုတ်အငွေ့ရှူကြဘူးသေချာတဲ့မျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့်အတူလိုက်ပါရန် Air-စင်ကြယ်စေ respiration ။ သင်၏လက်အဘို့သင်၏ခြေနှင့်ဓာတု-ခံနိုင်ရည်လက်အိတ်ကာကွယ်ပေးရန် impervious ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်သတိရပါ။
2 ။ 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ
အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်ဧရိယာလတ်ဆတ်တဲ့လေထု၏လုံလောက်သောစီးဆင်းမှုရှိရမည်။ သေချာသည်သင်၏အလုပ်လုပ်အာကာသနှင့်အတူကောင်းစွာ-တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်; အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, ပရိသတ်တွေနှင့်လေထုသန့်ရှင်းရေးကိရိယာတစ်ခုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်း, lockable ဗီဒိုများနှင့်ဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီး။
ရေပြေး၏ copious ငွေပမာဏနှင့်အတူသတိသင်၏မျက်စိဆေး။ သူတို့ကိုသင်ရှိသည်နှင့်သင်အလွယ်တကူအဲဒီလိုလုပ်ဖို့တတ်နိုင်လျှင်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဖယ်ရှားပါ။ အဆိုပါစပ်စွာဆေးနှင့်အတူ Continue ။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်, တစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှချက်ချင်းဆေးကုသမှုသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ရှာကြာလော့။
လတ်ဆတ်တဲ့လေထု၏အလုံအလောက်စီးဆင်းမှုနဲ့အတူပွင့်လင်းသောဧရိယာဖို့ဒဏ်ရာရသူယူလာပါ။ အသက်ရှုနေစဉ်အတွင်းအခက်အခဲများရှိခြင်းရှိလျှင်, အောက်စီဂျင်ထောက်ခံမှုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ချက်ချင်းဆေးကုသမှုသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ရှာကြာလော့။
အနည်းဆုံးအား 15 မိနစ်ရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာ running ၏ copious ငွေပမာဏနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ clean ။ ယားယံခြင်း, နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်နီခြင်းဆက်ရှိနေသေးပါက, ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဆရာဝန်ကနေချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြာလော့။
မျိုလြှငျ, အန်သွေးဆောင်ကြပါဘူး။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သင်၏နှုတ်ကိုလျှော်ရေအများကြီးသောက်မှာအနည်းဆုံးတစ်ဝက်တစ်လီတာ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်လက်ရှိပါလျှင်တစ်ဦးအဆိပ်စင်တာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသို့မဟုတ်မဆိုင်းမတွဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ထံမှဆေးကုသမှုရှာကြာလော့။
4 ။ 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole (25676-75-9) ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ
ထိုကဲ့သို့သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းနှင့် eyewash အဖြစ်အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတပ်ဆင်ရန်သေချာစေပါ။
အောက်တွင် 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole သုံးပြီးပြီးနောက်၏မှတ်ချက်ကိုယူဖို့အတွက်မှတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
တစ်ဦးစနစ်တကျသော့ခတ်ကက်ဘိနက်ထဲမှာကွာ Keep သို့မဟုတ်ဝေးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကနေအံဆွဲ။
အလုပ်လုပ်ခုံတန်းလျားကူးစကျမှုပပြောကျစေခြင်းနှင့် spillages နှင့်အခြားညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားပစ်လည်းသန့်ရှင်း။
လူအပေါင်းတို့သည်ညစ်ညမ်းအဝတ်ကိုချွတ် ယူ. နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကြိုတင် re-အသုံးပြုမှုသူတို့ကိုဆေးကြောပါ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပျော့စားဆပ်ပြာနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပဒေသာ running ရေ၌သင်၏လက်ဆေးကြောပါ။
အဆိုပါယိုဖိတ်, အချည်းနှီးသောကွန်တိန်နာ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အကြွင်းအကျန်များကိုစွန့်သည့်အခါအမြဲတမ်းဒေသခံစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်လျော။
သငျသညျ 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole အသုံးမပြုသည့်အခါအောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များကိုယူ:
7 ။ 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole (25676-75-9) သိုလှောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
သည်အခြားဓာတုပစ္စည်းများ, အစိုဓာတ်ကို, အပူသို့မဟုတ်မည်သည့်ဓာတ်အေးဂျင့်မှမြင်အောင်မပြပါနဲ့။
အငွေ့, အငွေ့သို့မဟုတ်မြေမှုန့်များ၏ရှူရှိုက်မိပါကန့်သတ်မယ့်အပြည့်အဝအကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်ရန်သတိရပါ။ ဤသည်ကိုလည်းပယ်ရှားအရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိနှင့်ဓာတုမဆိုတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်မှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်။
တစ်အငွေ့ hood ကိုအခန်းထဲက၌ဤဓာတုအမြဲတမ်းသုံးရန်
8 ။ 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) မတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
သငျသညျမီး extinguishing ခင်အကာအကွယ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ရန်သတိရပါ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်သို့မဟုတ်အရက်ကိုသုံးပါ။
အာဂွန်စုပ်သုံးပြီးမျက်နှာပြင်ကနေအရည်ပုံစံ၌မဆိုယိုဖိတ်မှုချွတ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်။ တစ်ဦးအမည်တပ်ထားသောကွန်တိန်နာအတွင်းအစွမ်းမဲ့စုပ်ထားပါနှင့်ဒေသခံဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများအရသိရသည်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စင်ကြယ်သောထိုဒေသတွင်ပိုးသတ်ဆေး, ပြီးတော့သူကလေခတ်။ သင့်ကိုအစဉ်ပုံမှန်ရေလိုင်းများသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းအတွင်းစီးဆင်းရန်အ spillage လွှတ်ပေးရန်ဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်သတိရပါ။
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole မြင့်မားတဲ့အပူချိန်, အားကြီးသောဓာတ်အေးဂျင့်များ, အပူ, အက်ဆစ်နှင့်ဘေ့စမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူလတန်းပြိုကွဲထုတ်ကုန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြသည်။
11 ။ (25676-75-9) သင်္ဘောအင်ဖို
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole များ၏အရေအတွက်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တံခါးခုံကိုအဆငျ့ Sara ခေါင်းစဉ် III ကို, အပိုင်း 302 နှင့် 313 ၏လိုအပ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ကြပါဘူး။ သင်ကိုင်တွယ်ဒီဓာတုနှင့် ပတ်သက်. မူအကငျြ့သငျ့ဧရိယာရဲ့ကုဒ်တွေနဲ့လိုက်လျောအာမခံပါသည်။
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) နည်းပညာပိုင်းဝန်ဆောင်မှု:
ကျနော်တို့အပါအဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းများအားလုံးဒေသများရှိအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေသောအတွေ့အကြုံရှိသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည် ဖြစ်. , Chromatography, ဓာတုပေါင်းစပ်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်များစွာသောပို။
4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, (25676-75-9) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း
သငျသညျကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဖွံ့ဖြိုးရေးသို့မဟုတ်သုတေသန application များအတွက် 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole အမြောက်အမြားလိုအပ်ပါသလား? ကိုယ့် Google ကဓာတုနာမကိုအမှီနှင့်သင့်အလို့ငှာထားပါ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole, ကဏ္ဍများ 1-9 ။
Ernö Pretsch, T. Clerc, ဂျေ Seibl, ဒဗလျူရှိမုန်အားဖြင့် အော်ဂဲနစ်ခြံဝင်း, စာမျက်နှာ 2-4 ၏ဖွဲ့စည်းပုံစိတ်ပိုင်းဖြတ်များအတွက်ရောင်စဉ်တန်းဒေတာများပြား။
Desmond ဂျေဘရောင်း, ယောဟန် Wiley & သားအဆိုပါ Heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများမှာ, စာမျက်နှာ 1302-1305 ၏ဓာတုဗေဒ။